Gbasara anyị | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ioamogesu.com bụ ozi ihe ọmụma kwa ụbọchị nke emere na June 2016.
Onye isi ọrụ: Paolo Tescione
Ndi ana-akpo: [email protected]
Ọ malitere na mberede. Anyị ghọtara na ụgbụ ahụ jupụtara na ozi na-ezighi ezi, ime ihe ike, ihe ọjọọ na akụkọ na-abụghị eziokwu. Ọtụtụ mmadụ dị ka ndị furu efu na enweghị ike ịgbaso ụzọ ziri ezi wee gbakụta Jizọs azụ.
Anyị kpebiri ịnwa ịkpọghachị ndị furu efu n'okwukwe ma anyị chọkwara atụrụ furu efu. Dị ka ilu nwa mmefu, anyị emeghewo ogwe aka anyị nye ndị laghachiri nzọụkwụ ha ma meghee obi ha nye Chineke.
Anyị malitere, juputara na ịnụ ọkụ n'obi, jiri ibe anyị, ahụrụ m Jizọs n'anya. Anyị kere ya ka ọ bụrụ etiti maka okwukwe anyị, kwekọrọ n'ụkpụrụ anyị ma kee ya iji nyere anyị aka ịchụso ebumnuche anyị. N’oge na-adịghị anya, amụrụ ioamogesu.com, saịtị ahụ chọrọ iweghachi Jizọs n’obi onye ọ bụla.
Anyị bụ otu ndị kwere ekwe ma na-eme Kraịst ma anyị nwere olile anya igosi mmadụ niile, jiri okwu anyị, mma nke okwukwe. Anyị na-ekwu maka okpukperechi na 360 Celsius, anyị na-anagide ihe ma na-emeghe maka ntụnyere ma anyị na-atụ nrọ maka ụwa ebe udo na-achị na ebe ịhụnanya bụ obi iti.
Biko sonyere anyị
Y’oburu n’echiche dika anyi, o buru na ichoro ima ihe banyere akuko ohuru ma choputara anyi n’ekpere na ihe n’ekpere, ihe ikwesiri ime bu ka anyi debanye aha anyi n’ozi nzipu ozi ma obu juo inata ozi anyi.
io hụrụ gị n'anya Jesus